​ ​ Dalxiis Dalxiis Hindiya Visa
Dalxiis Dalxiis Hindiya Visa
Dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay inaad ka ogaato Visa Dalxiiska Dalxiiska Hindiya ayaa laga heli karaa boggan. Fadlan hubi inaad akhriday faahfaahinta kahor intaadan dalban eVisa Hindiya.
Hindiya waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin qalaad safarka halka loo socdo laakiin runtii waa goob ay ka buuxaan dhaqamo hodan ah oo kala duwan oo laga soo bilaabo meeshii aad hubto inaad dib ugulaabanayso xusuus kala duwan oo xiiso leh. Haddii aad tahay socdaal caalami ah oo go'aansaday inuu booqdo Hindiya dalxiis ahaan waxaad ku jirtaa nasiib wacan maxaa yeelay uma baahnid inaad dhibaato badan soo marto si safarkan dheer ee la sugayey u dhaco. Dowladda Hindiya waxay siisaa Visa elektaroonig ah ama fiisada elektaroonigga ah ee loogu talagalay dalxiisayaasha si gaar ahna waad awoodaa dalbo e-Visa khadka tooska ah halkii aad ka heli lahayd Safaaradda Hindiya ee dalkaaga sida warqadda dhaqameed ee Visa la sameeyo. Fiisooyinka Dalxiis ee Hindiya loogu talagalay maahan oo keliya dalxiisayaasha booqda waddanka ujeeddooyinka aragtida ama madadaalada laakiin sidoo kale waxaa loo maleynayaa inay fududeyneyso nolosha kuwa doonaya inay booqdaan Hindiya ujeedada booqashada qoyska, qaraabada, ama asxaabta .
Xaaladaha Fiisaha Dalxiiska Hindiya
Sida waxtar iyo waxtar u leh sida Fiisaha Dalxiisayaasha Hindida ah, waxay la timid liis ay ku qoran yihiin shuruudo aad u baahan tahay inaad la kulanto si aad ugu qalanto. Waxaa heli kara oo keliya socdaalayaasha damacsan joogi karin wax aan ka badnayn 180 maalmood dalka hal mar, taasi waa, waa inaad ku soo noqotaa ama aad u sii socotaa safarkaaga aad uga baxeysid dalka gudihiisa 180 maalmood gudahood laga soo bilaabo markii aad soo gashay waddanka Dalxiis E-Visa. Sidoo kale uma qaadi kartid safar ganacsi Hindiya dalxiis dalxiis oo Hindiya ah, kaliya mid aan ganacsi ahayn. Ilaa iyo intaad ka buuxineysid shuruudahaan u-qalmitaanka ee Visa-ha Dalxiiska Dalxiiska ee Hindiya iyo sidoo kale shuruudaha u-qalmitaanka e-Visa guud ahaan, waad u-qalmi doontaa inaad dalbato Visa-ha Dalxiiska ee Hindiya.
Sida kor ku xusan, Fiisaha Dalxiiska Dalxiiska Hindiya waxaa loogu talagalay dadka safarka ah ee caalamiga ah ee doonaya inay soo booqdaan waddanka dalxiis ahaan si ay u booqdaan dhammaan goobaha dalxiiska ee caanka ah oo ay ku qaataan dalxiis madadaalo ah waddanka ama kuwa doonaya inay soo booqdaan eheladooda deggan dalka gudihiisa. Laakiin Fiisaha Dalxiiska Hindiya ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa socdaalayaasha caalamiga ah ee halkan imanaya si ay uga qaybgalaan barnaamijka Yoga ee muddada gaaban, ama ay qaataan koorso aan socon doonin in ka badan 6 bilood oo aan bixin doonin wax shahaado ah ama shahaado diblooma ah, ama ka qayb qaadashada shaqo iskaa wax u qabso ah aan ka badneyn mudada 1 bil. Kuwani waa sababaha kaliya ee saxda ah ee aad ku dalban karto Visa Dalxiis ee Hindiya.
Noocyada Fiisaha Dalxiiska Hindiya
Laga bilaabo 2020, dalxiiska elektaroonigga ah ee Visa-ka laftiisa ayaa laga heli karaa saddex nooc oo kala duwan iyadoo kuxiran mudadeeda iyo booqdayaashu waa inay dalbadaan midka ugu haboon ujeedadooda booqashada Hindiya.
Midkii kowaad wuxuu u noocyadan waa Visa-ha Dalxiiska Dalxiiska ee 30-ka maalmood ee Hindiya, kaas oo u oggolaanaya booqdaha inuu joogo waddanka muddo 30 maalmood ah laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka waddanka waana Fiisaha Galitaanka Labaad, taas oo macnaheedu yahay inaad laba jeer ku soo geli karto waddanka muddada ansaxnimada Visa. 30-ka Dalxiis ee Dalxiiska elektaroonigga ah wuxuu keenaa jahwareer xoogaa, si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay waxaa jira Taariikh Dhaafitaan ah oo lagu xusay fiisada elektaroonigga ah laakiin tani waa taariikhda ay tahay inaad horay u soo gasho dalka, ma ahan kii ka horreeyay ee ay tahay inaad dalka ka baxdo. Taariikhda bixitaanka waxaa la go'aamin doonaa oo keliya taariikhda aad dalka soo gashay oo waxay noqon doontaa 30 maalmood ka dib taariikhda la sheegay.
Nooca labaad ee Dalxiiska elektaroonigga ah ee Visa-ha waa Visa-ha Dalxiiska Dalxiiska ee 1-da sano ee Hindiya, kaas oo ansax ah 365 maalmood laga bilaabo taariikhda la soo saaray e-Visa. Waxaa muhiim ah in la ogaado halkaan si ka duwan 30-ka Dalxiis ee Dalxiis ee Fiisaha Dalxiiska ee 1-da sano ansaxnimadiisa waxaa lagu go'aamiyaa taariikhda ay soo baxday, ee ma ahan taariikhda booqdaha dalku soo galay. Intaa waxaa sii dheer, Fiisaha Dalxiis ee Sannad 1 waa a Visa Galitaan Badan, taas oo macnaheedu yahay inaad ku soo geli karto waddanka dhowr jeer oo keliya muddada ansaxnimada Visa.
Nooca saddexaad ee Dalxiiska elektaroonigga ah ee Visa waa 5-ta Dalxiis ee Dalxiis ee Hindiya, kaas oo shaqeynaya 5 sano laga bilaabo taariikhda la soo saaray sidoo kale waa Visa Galitaan Badan.
Qaar badan oo ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay Visa Dalxiiska Dalxiiska Hindiya waxay la mid yihiin kuwa kale e-fiisooyinka. Kuwaas waxaa ka mid ah nuqul elektiroonig ah ama sawir leh oo ah bogga koowaad (taariikh nololeed) ee baasaboorka booqdaha, oo ay tahay inuu yahay Baasaboor caadi ah, maahan mid Dibloomaasiyadeed ama nooc kale oo Baasaboor ah, oo waa inuu ahaadaa mid shaqeynaya ugu yaraan 6 bilood laga bilaabo taariikhda soo gelitaanka Hindiya, haddii kale waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso baasaboorkaaga. Shuruudaha kale waa nuqul ka mid ah booqdaha sawirka midabka baasaboorka ee dhawaanta, cinwaanka emaylka shaqada, iyo kaarka deynta ama kaarka deynta ee bixinta khidmadaha dalabka. Codsadayaasha sidoo kale waxaa laga codsan karaa inay bixiyaan caddaynta haysashada lacag ku filan si loo maalgeliyo safarkooda iyo joogitaanka Hindiya, iyo sidoo kale a soo noqosho ama tigidh sii socda dalka ka baxsan. In kasta oo fiisaha elektaroonigga ahi uusan kaaga baahnayn inaad booqato Safaaradda Hindiya, waa inaad hubisaa in baasaboorkaagu leeyahay laba bog oo maran oo Sarkaalka Socdaalka uu ku tuman doono garoonka diyaaradaha.
Sida fiisooyinka elektaroonigga ah ee kale, qofka haysta Visa-ha Dalxiiska Dal-ku-galka ah waa inuu ka soo gala waddanka la ansixiyay Boostada Hubinta Socdaalka kuwaas oo isugu jira 28 garoon diyaaradeed iyo 5 dekedood oo qofka haysta waa inuu sidoo kale ka baxo Boostada Hubinta Socdaalka ee la ansixiyay.
Hadda oo aad haysatid dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan Fiisaha Dalxiiska Dalxiiska Hindiya waxaad si fudud ugu dalban kartaa isla. The foomka codsiga Fiisaha Dalxiiska ee Hindiya waa mid fudud oo toos ah iyo haddii aad la kulanto dhammaantood shuruudaha u-qalmitaanka oo aad haysato wax kasta oo looga baahan yahay inaad ku dalbato markaa wax dhib ah kama heli doontid dalbashada. Haddii, si kastaba ha noqotee, aad u baahan tahay wax caddeyn ah oo aad u baahan tahay la xiriir caawimaadkeena caawimaad iyo hagis.
Haddii ujeeddada booqashadaadu la xiriirto ganacsi markaa waa inaad dalbataa Ganacsiga Hindida Visa (eVisa India Booqasho Ganacsi).